Jaalkii Trump Barrack ayaa waaxda Caddaaladdu xidhay waxayna ku eedeysay inuu shisheeye uga ololeeyey maraykanka - WalWaal Online News and Information about Somalia
Home Wararka Jaalkii Trump Barrack ayaa waaxda Caddaaladdu xidhay waxayna ku eedeysay inuu shisheeye...
Jaalkii Trump Barrack ayaa waaxda Caddaaladdu xidhay waxayna ku eedeysay inuu shisheeye uga ololeeyey maraykanka
Muqdisho (Walwaal.com) – Thomas Barrack, oo ah bilyaneer saaxiib la ah Donald Trump madaxna ka ahaa kharashkii caleema saarka madaxweynihii hore, ayaa la xidhay Talaadadii waxaana lagu soo oogay dacwad ah inuu si sharci darro ah ugu ololeeyay maamulka Trump wakiila ka ahaa Imaaraatka Carabta.
Dacwado 7-dacwadood ah oo ay soo gudbiyeen dacwad oogayaasha federaalka ee Brooklyn, New York, ayaa lagu sheegay in Barrack, oo ah shaqaale hore iyo ganacsade Imaaraati ah uu ku guuldareystay inuu isu diiwaangaliyo in uu yahay ololeeye isla markaana uu u adeegsaday saameynta siyaasadeed ee arrimaha dibadda Imaaraadka inuu ka horuumariyo himilooyinka ay ka leedahay Mareykanka.
Barrack, oo lagu xidhay magaalada Los Angels, ayaa lagu eedeeyay inuu si isdaba joog ah u sheegay been FBI-da intii lagu jiray wareysi ku saabsanaa la macaamilkiisa Imaaraatka.
Qof u hadlay Barrack ayaa beeniyay eedeymaha. “Mudane. Barrack wuxuu si iskii ah ugu diyaar garoobay baarayaasha bilawgii. Ma ahan dambiile, wuxuuna qirayaa inuusan dambiga geliny, ”ayuu yiri afhayeenka.
Mark Lesko oo ah sarkaal ka tirsan Waaxda Caddaaladda ee Mareykanka ayaa ku sheegay war-saxaafadeedkiisa in “eedeysanuhuu uu si isdaba joog ah uga faa’iideystay saaxiibtinimada oo uu kaalmo u fidiyey murashax markii danbe loo doortay madaxweyne, isagoo uga sameeyey olole sare, saraakiisha dowladda, iyo warbaahinta Mareykanka si loo horumariyo himilooyinka siyaasadeed ee dowlad shisheeye isagoon shaacin himilooyinkooda runta ah. ”
Barrack, oo 74 jir ah, ayaa ah nin muddo dheer xulafo la ahaa Trump isla markaana ahaa aasaasaha shirkadda ka ganacsata dhijitaalka gaarka ah ee Digital Bridge Group Inc, taas oo loo yaqaanay ‘Colony Capital Inc’ ka hor inta aan magaca laga bedelin bishii Juun.
Barrack wuxuu iska casilay xilka madaxa fulinta DigitalBridge sanadkii 2020. Bishii Abriil, wuxuu kaloo iska casilay gudoomiyihii fulinta ee shirkada laakiin wuxuu sii ahaay agaasime qayb fulineed. Warbaahinta Forbes waxay ku qiyaastey hantidiisa $ 1 bilyan.
DigitalBridge waxay leedahay qiyaastii $ 32 bilyan oo hanti dijitaal ah oo ay gacanta ku hayso, oo ay ku jiraan xarumaha xogta ee ku baahsan Waqooyiga Ameerika iyo Boqortooyada Ingiriiska. Barrack wuxuu leeyahay qiyaastii 5.7% DigitalBridge, balse 1.4% $ 6.93 saamiyadeedii waa la xanibay Talaadadii.
Haweenay Afhayeen ah oo u hadasha DigitalBridge ayaa diiday in ay faallo ka bixiyo.
Barrack wuxuu ahaa taageere caan ah ololihii doorashada madaxtinimada ee Trump sanadkii 2016 wuxuuna agaasime ka noqdayy guddigii caleemo-saarka.
Dacwad oogayaasha dowlada federaalka ayaa doonaya in xabsiga la dhigo Barrack, iyagoo maxkamada u sheegay in hantidiisa faraha badan, helitaankiisa diyaaradaha gaarka loo leeyahay iyo taariikhdiisa badano darteed uu baxsan karo.
Xigasho Reuters, Reporting by Jan Wolfe in Washington D.C. and Chibuike Oguh in New York; Editing by Mark Heinrich and Peter Cooney
Af-celintii Walwaal.com, by Hassan M. Dhiilood
Previous articleFadeexada Pegasus. Maxaa ku qarsoon qolalka sirdoonka Israel?
Next articleDambiyo basaasnimo oo ay wada galeen Sacuudiga iyo Imaaraatku. Maxay tahay ujeedada kuwa ku lugta leh iyo bartilmaameedoodu?